Banyere Anyị - Shanghai Bosun abrasive Co., Ltd
Shanghai Bosun abrasive Co., Ltd. bụ ọkachamara abrasive ụlọ ọrụ, nke nwere ike nchọpụta, na-emepụta ma na-ere ụdị nile nke abrasive. The isi ngwaahịa na-agụnye nile di iche iche nke ígwè shot, ígwè grit, ígwè ịkpụ waya shot, igwe anaghị agba nchara bọọlụ, aluminum bọọlụ, zinc bọọlụ, ọla kọpa bọọlụ nakwa dị ka ọla kọpa ájá, aja aja corundum, nwa corundum na na. The ụlọ ọrụ nwere elu na ngwá na technology, ike technology ike na zuru okè quality nnyocha ụzọ. The ngwaahịa na-nditịm na-emepụta na-anwale dị ka ikwu ọkọlọtọ, n'ihi ya, ọ na-tụkwasịrị obi site ahịa anyị na a ga-họọrọ dị ka ẹkedọhọde ngwaahịa site ọtụtụ ụlọ ọrụ nke na-amị ájá-gbawara akụrụngwa.
The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001 mba quality usoro asambodo, ndị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji shipbuilding, akpa, ụgbọala, ígwè, foundry, ígwè, Ngwuputa, nkume ndị ọzọ ọrụ, nke na-ere ka ihe karịrị 20 anāchi achi, na obodo nke China, na exported na United States, Canada, na mba Europe na Southeast Asian mba. Anyị na ngwaahịa na àgwà e nabatara ahịa gafee n'ụwa.
The ụlọ ọrụ ịzụlite ika site importing ọkachamara management talent, oru ọhụrụ na ngwaahịa mmepe. The ụlọ ọrụ koodu omume na-eme ihe bara uru ihe, na-emesi arụmọrụ, ekwenyere n'eziokwu na-eme nkịtị development. Na ụlọ ọrụ echiche na-eme ka ọganihu site technology, na-achọ arụmọrụ site na-eri, na-emepe emepe site quality, ma rụọ ọrụ site management. Iji elu ahịa na ọrụ echiche ka mma uru nakwa n'aka nke ụlọ ọrụ na-enye elu-edu ngwaahịa na ọrụ ahịa n'ụlọ na mba ọzọ. Ka nkịtị development na ike a mma n'ọdịnihu.
Sandblasting Media Market size bụ expecte ...
2016-08-15 Sandblasting Media Market size na-atụ anya na-eto eto na 6.5% CAGR si 2016 na 2023. Global sandblasting media ahịa size, na olu okwu, ka atọrọ ka na-eto eto na dị n'okpuru ...